ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ April 3, 2017 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 969 Views
မေး ။ ။ ဒီကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘယ်လိုကြောင့်မဲအပြတ်သတ် အနိုင်ရခဲ့ပါသလဲ?
ဖြေ ။ ။ မဲအပြတ်သတ် အနိုင်ရရှိသွားတာကတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေ စေတနာထားပြီးတော့မှ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီးတော့ မဲအပြတ်သတ်ထည့်ပေးကြတာပေါ့၊ အဓိက ကျေးရွာတွေကတော့ ရွာလွတ်၊ သက္ကော၊ ကညှော်၊ မုရစ်ကလေး နေရာတော်တော်များများတော့ မဲအပြတ်သတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့။
ချောင်းဆုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ကြည်သိန်း(MNA)
မေး ။ ။ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေ ဘယ်လို လုပ်ခဲ့တာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော်တို့ အဓိကကတော့ ပြည်သူလူထုကိုထိတွေ့တဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပေါ့နော်၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ ရက်ပေါင်း ၆၀ ပေးထားတဲ့အထဲမှာ ၅၅ ရက်တိတိ အချိန်ပြည့်တစ်နေကုန်ပေါ့၊ တစ်ချို့ရွာတွေကျတော့ ၃-၄ ခေါက် နေ့တိုင်းသွားပြီးတော့ ပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့တယ်၊ သူတို့ တင်ပြတဲ့အရာတွေကို ဆွေးနွေးပေးတယ်၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုရှင်းပြတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ ကျနော်ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံတွေကိုရှင်းပြတယ်၊ ပြီးတော့မှ မဲအနိုင်ရရင် ‘လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လယ်သမားများအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးမယ်’ ဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်တွေပေးခဲ့တယ်။
မေး ။ ။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကတိကဝတ်တွေကို ဘယ်တော့ အကောင်အထည်ဖော်သွားမှာလဲ?
ဖြေ ။ ။ အခုကစပြီတော့ အကောင်အထည်ဖော်နေပြီးပေါ့နော်၊ လယ်သမားတွေ လိုချင်တဲ့ မျိုးစပါးတွေကို မှာထားပြီးပြီး၊ တစ်ချို့ရေရှားတဲ့နေရာတွေကျတော့ အဝီစိတွင်း တူးပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော်၊ ဒါကတော့ ပါတီဘက်ကနေ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အစီအစဉ်မှန်သမျှကို ကျနော်တို့ အကုန်လုပ်သွားပေးမယ်။
မေး ။ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် ဘယ်လိုအဆိုမျိုးကို လွှတ်တော်မှာ ပထမဦးဆုံး တင်သွင်းသွားဖို့ ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ ကျနော် ဒေသခံတွေနဲ့ ထိတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်၊ သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ၊ အဆိုတင်သင့်တဲ့ဟာတွေကို သေသေချာချာလေ့လာပြီတော့မှ ဒေသနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အဆိုပေါ့နော်၊ အဓိကကတော့ ဥပဒေပြုရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ ကိုယ်ကနေပြီးတော့ သေသေချာချာ ထိထိမိမိဖြစ်ဖို့ တော်တော်လေးကို လုပ်ရအုံးမယ်၊ ကိုယ့်ဆီကလိုအပ်ချက်တွေ တောင်းတဲ့ဟာကျတော့ ဒေသခံတွေနဲ့ ထိတွေ့ပြီးတော့မှ တစ်ခုချင်းစီ လိုက်မှတ်ပြီတော့ တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်း အဆိုတင်သွင်းသွားမှာပေါ့။
မေး ။ ။ ဆရာ့အနေနဲ့ လွှတ်တော်မှာအဆိုတစ်ခု တင်သွင်းရင် အဓိကအလေးထားရမယ့်အရာက ဘာဖြစ်မလဲ?
ဖြေ ။ ။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုတာ ဒေသခံပြည်သူတွေ ရွေးချယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်လာတာပါ၊ အဓိကကတော့ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ အသံကိုနားထောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့တွေမှာ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ အများစုက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သွားပြီးဆိုရင် ကိုယ်တင်ချင်သလိုတင်ပုံစံမျိုးနဲ့ တင်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒုက္ခရောက်တယ်ပေါ့နော်၊ ဒေသခံတွေရဲ့ သဘောထားဆန္ဒမမေးဘဲနဲ့ ဘာမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လို့ မရဘူး။
မေး ။ ။ ဒေသခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒါကတော့ ပူးပေါင်းပြီး လုပ်ဆောင်ရမှာပဲ၊ ကိုယ့်ဒေသရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို တင်ပြဖို့ အချိတ်အဆက်မိနေမှရမယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ ဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အရေးကိစ္စတွေကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာ တင်ပြရတယ်လေ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချင်းချင်း ညီညွတ်မှုမရှိရင် ဘယ်တော့မှ ဒီကျွန်းကြီးမတိုးတက်ဘူး၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှသာ ဒီကျွန်းကြီးတိုးတက်မယ်။
မေး ။ ။ ဘီလူးကျွန်းဒေသအတွက် ဘာတွေ လုပ်သွားဖို့ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ လယ်သမားတော်တော်များများက စပါးစိုက်တာရှုံးများတယ်၊ ဒီအရာတွေကို အကျိုးအမြတ်ရှိအောင် ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတာ တစ်ခြားသက်ဆိုင်တဲ့ ဒေသတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်၊ စပါးစိုက်ရင်းနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ၊ ရေနက်ကွင်းတစ်ချို့ကို ဘာလုပ်လို့ရမလဲ စသဖြင့်ပေါ့နော်၊ အဲဒါတွေကို အဓိကထားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမှပေါ့၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့ သက်ဆိုင်ရာ ဌာနတွေနဲ့ ချိတ်ပေးမှာပေါ့။
မေး ။ ။ ဘီလူးကျွန်းဒေသမှာ လယ်ဧကများစွာ နှစ်စဉ် ရေနစ်မြုပ်တာ ကြုံတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်၊ ဒီအပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ ဒီဘီလူးကျွန်းမှာ ချောင်းတော်တော်များများက တိမ်ကောတယ်ပေါ့နော်၊ ဒီအရာတွေကို အများကြီးလုပ်ရမယ်၊ အခုချိန်မှာကျတော့ အနိုင်ရပါတီမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆည်မြောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင် သက်ဆိုင်ရာဆည်မြောင်းဌာနကို တင်ပြပြီးတော့မှ လုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင် လုပ်ပေးမှာပေါ့၊ တချို့နေရာတွေကျတော့ အစိုးရဘက်က ကူညီဖို့ အခက်အခဲဖြစ်ရင်လည်း ကျနော်တို့ ပါတီဘက်က လုပ်ပေးနိုင်သလောက် ချောင်းတွေကို တူးပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံး ဆရာ့အနေနဲ့ ဘာများဖြည့်စွက်ပြောကြားချင်တာ ရှိလဲ?
ဖြေ ။ ။ ကျနော့အနေနဲ့ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ကတိစကား ပေးထားတာရှိတယ်၊ အဲဒါကို အတတ်နိုင်ဆုံး လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်၊ ကျနော်ဟာ ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ပါ၊ ဒေသခံပြည်သူတွေ ခိုင်းပါ၊ ကျနော့တတ်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ကတိစကားအတိုင်း တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီး ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။
အခုလိုဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် မွန်သတင်းအေဂျင်စီမှ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Previous ချောင်းဆုံကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌ မဲပေးသူဦးရေ ၃၅% ရာနှုန်းသာရှိ
Next မွန်ပြည်နယ် SMEs လုပ်ငန်းများ လာမည့်မေလတွင် စွမ်းဆောင်ရည်စတင်မြှင့်တင်မည်